MAHAFINARISANA ny Crane of the Moon NMP FSX & P3D - Freeware
Saripika feno sary-tena avy amin'ny Craters of the Moon (USA) FSX ary P3D v2 +.
Mandrakotra tanteraka ny 3625 toradroa km. Ny fanapahan-kevitra ny 1 m / Pix mitondra anao hareza-maranitra ny sary na dia akaikin'ny tany. Nahafinaritra tsara indrindra amin'ny ambany, na ny miadana asa! Koa ahitana ny vahaolana avo 10 M isam-ponina harato.
Mba hahazoana any no afaka manidina avy any amin'ny seranam-piaramanidina ao an-tanànan'i Hailey (KSUN) Miorina 60 kilaometatra avy any amin'ny firenena piarovana, ny toerana manodidina no mahatonga anao eo amin'ny ankaviany.
Craters of the Moon National Monument and Preserve dia Monumenam-pirenen'i Etazonia ao amin'ny Lemaka renirano Idaho afovoany. Ny zaridaina dia noforonina mba hiarovana tontolo lava misy renirano lava miaraka amina nosy cinder conce sy sagebrush. Nanomboka tamin'ny 15,000 taona lasa izay, ny volon-dranonitra lava novolavolaina. Na dia miovaova be aza ny velaran'ilay valan-javaboary avy amin'ilay vatolampy selestialy taorian'izay, dia notsidihin'ny mpanamory sambon-danitra Apollo 1969, Alan Shepard, Edgar Mitchell, Joe Engle ary Eugene Cernan izay nitety ny tany lava mba hahafantarana ny fototry ny volkano. geolojia ho fanomanana ny dia ho avy any amin'ny volana. (Wikipedia)
Zava-dehibe ny torolalana sy ny Download vaovao
Ity Download Tena mavesatra 2.32 GB raha tsy Jumbo mpikambana manantena ny miandry ora maro ny Download fotoana .. toerana manodidina ity dia vaky ho 3 faritra, araka ny Download ny craters_of_the_moon_nmp.zip unzip ny zava-drehetra any an-fampirimana, ary tsindrio eo amin'ny craters_of_the_moon_nmp.exe mba hanomboka ny fametrahana mandeha ho azy.
Ny fametrahana dia 100% automated ny Rikoooo, Ny configurator dia hiatrehana ho anareo ny fisoratana anarana sy ny fampahavitrihana ny ny toerana manodidina eo amin'ny simulator. Rehefa uninstalling, ny installer hampodiko ny fanahafana niaviany.
Nohavaozina taminy 01 / 18 / 2016: Io toerana manodidina manarona izao 18,125 toradroa km fa tsy 3625 toradroa km afaka hankasitraka bebe kokoa ny VFR sidina.
Auto-install havaozina ho an'ny dikan-teny 10
Downloads 26 848